Title: From Rice Bowl to Food Basket: ဆန အ ို်းမှသည စာ်းဖ ယ စိုံ မခင ်းရတာင ်းဆီသ ိုွံ့ - မမန မာန ိုင ငံစ ိုက ပ ်းရရ်းနှင ွံ့
Description/subject: ဆန အ ို်းမှသည စာ်းဖ ယ စိုံမခင ်းရတာင ်းဆီသ ိုွံ့- မမန မာန ိုင ငံစ ိုက ပ ်းရရ်းနှင ွံ့ စာ်းနပ ရ ကခာကဏ္ဍရခတ မီတ ို်းတက မှုအတ က မဏ္ဍ င (၃) ရပ အက ဉ ်းခ ပ မမန မာန ိုင ငံသည ရမပာင ်းလဲမပ မပင မှုအတ က အသင ွံ့အရနအထာ်းတ င ရှ ရနဖပီ်း အဆ ိုပါအရနအထာ်းမှာ န ိုင ငံွံ့ လူဦ်းရရ (၁၀) ဦ်းလ င (၇) ဦ်းနှုန ်း ရနထ ိုင ဖပီ်း ရနထ ိုင သူလူဦ်းရရအမ ာ်းစိုမှာလည ်း ဆင ်းရဲန မ ်းပါ်းမှုသံသရာထဲတ င သာ ရှ ရနရသ်းသည ွံ့ မမန မာန ိုင ငံရက ်းလက ရဒသမ ာ်းအတ က ပ ိုမ ိုမှန ကန ရနပါသည ။ ထက ဝက မကရသာအဆ ိုပါလူဦ်းရရမှာ စ ိုက ပ ်းရရ်းက ို တ ိုက ရ ိုက လိုပ က ိုင ရဆာင ရ က ရနကကဖပီ်း မ မ နှင ွံ့ မ သာ်းစိုအတ က ၊ ရပ ရ ာအသ ိုင ်းအဝ ိုင ်းအတ က နှင ွံ့ ရရာင ်းဝယ ရဖာက ကာ်းမှုအတ က စ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ ရနကကပါသည ။ က ိုယ ပ ိုင လယ ယာရမမမရှ ရသာ အမခာ်းရက ်းလက ရန အမ ာ်း အမပာ်းမှာထ က ကိုန သီ်းနှံသယ ယူပ ိုွံ့ရဆာင မခင ်း၊ စာ်းရသာက ကိုန စီမံမပ မပင ထိုတ လိုပ မခင ်းနှင ွံ့ ၎င ်းတ ိုွံ့နှင ွံ့ ဆက န ယ ရသာ ဝန ရဆာင မှုလိုပ ငန ်းအစရှ သည ွံ့ လယ ယာမပင ပလိုပ ငန ်းမ ာ်းမဖင ွံ့ အသက ရမ ်းဝမ ်းရက ာင ်းမှု မပ ရနကကပါသည ။ က န ရှ သူမ ာ်းမှာ မမန မာန ိုင ငံရှ အမခာ်းရသာဖမ ွံ့ကကီ်းမ ာ်းနှင ွံ့ န ိုင ငံရပ မခာ်းမ ာ်းသ ိုွံ့ထ က ခ ာဖပီ်း အလိုပ အက ိုင အခ င ွံ့အလမ ်း ရှာရဖ ကကပါသည ။ ကမ္ာွံ့စီ်းပ ာ်းရရ်းအခ က အမခာက ရသာရဒသ၌တည ရှ ရနလင ွံ့ကစာ်း မမန မာန ိုင ငံသည ရဒသတ င ်း၌ ဆင ်းရဲန မ ်းပါ်းမှုနှင ွံ့ အာဟာရခ ွံ့တဲွံ့မှုနှုန ်းအမမင ွံ့ဆိုံ်းစာရင ်းဝင လ က ရှ ရနပါသည ။ မမန မာ၏အ မ နီ်းခ င ်းအာရှန ိုင ငံမ ာ်းတ င ဝင ရင တ ို်းတက လာမခင ်းနှင ွံ့ ဖမ ွံ့မပဆန လာမခင ်းမ ာ်းနှင ွံ့အတူ ရမပာင ်းလဲမဖစ ရပေါ် လာသည ွံ့ စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်း၏ဝယ လ ိုအာ်းတိုန ွံ့မပန မှုက ို ၎င ်းတ ိုွံ့စာ်းသိုံ်းရနရသာ အမ ်းအစာ်းစိုံလင လာသည ွံ့ စာ်းရသာက ကိုန မ ာ်းအာ်းမဖင ွံ့ ရတ ွံ့ရှ ရပါသည ။ ရက ်းလက ရဒသဖ ံွံ့ဖဖ ်းတ ို်းတက မှုအတ က ရိုပ ပ ိုင ်းဆ ိုင ရာအရမခခံ အရဆာက အအိုံမ ာ်းတ င ရင ်းနှီ်းမမ ပ နှံရပ်းမခင ်း၊ မူဝါဒမ ာ်းခ မှတ ရပ်းမခင ်းမဖင ွံ့ ရတာင သူလယ သမာ်းမ ာ်းအာ်း ရစ ်းက က လ ိုအပ ခ က နှင ွံ့ က ိုက ညီသည ွံ့ထိုတ ကိုန မ ာ်းစ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ န ိုင ရန အာ်းရပ်းလှုံွံ့ရဆာ မှုမပ လ က ရှ ရာ ယင ်းလိုပ ရဆာင မှုမှာရတာင သူ လယ သမာ်းမ ာ်း၊ ထ က ကိုန သီ်းနှံမ ာ်းတန ဖ ို်းမမ င ွံ့စီမံမပ မပင ထိုတ လိုပ သည ွံ့ စီ်းပ ာ်းရရ်းလိုပ ငန ်းရှင မ ာ်းနှင ွံ့ ဖမ ွံ့မပကိုန စည ရစ ်းက က သာမကမပည ပရစ ်းက က မ ာ်းက ိုပါ ခ တ ဆက ဝန ရဆာင မှုရပ်းသည ွံ့လိုပ ငန ်းရှင မ ာ်းအကကာ်း ခ ိုင မာဖပီ်းအက ်း ရှ သည ွံ့ လိုပ ငန ်းစက ဝန ်းတစ ရပ က ို မဖစ ရပေါ်လာရစပါသည ။ စ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ မှုနှုန ်းမမ င ွံ့တင မခင ်းနှင ွံ့ က ဲမပာ်းရသာ ထိုတ လိုပ မှုစနစ (တန ဖ ို်းနည ်းသီ်းနှံစ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ မှုမှ တန ဖ ို်းမမင ွံ့ သာ်းငါ်းရမ ်းမမြူထိုတ လိုပ မခင ်း၊ ဆီထ က သီ်းနှံ၊ ပဲမ ်းစိုံသီ်းနှံ၊ ဥယ ာဉ မခံသီ်းနှံနှင ွံ့ ရရထ က စာ်းရသာက ကိုန မ ာ်း ထိုတ လိုပ မခင ်းအစရှ သည ) လိုပ ရဆာင မခင ်းတ ိုွံ့သည တ ို်းပ ာ်းလာရသာဖမ ွံ့ရနစာ်းသိုံ်းသူလူတန ်းစာ်းအတ က စာ်းရသာက မှုကိုန က စရ တ က ို တည ဖင မ ရစရိုံသာမက ရက ်းလက ရနမပည သူလူထို၏ ဝင ရင က ိုတ ို်းတက လာရစကာ ရဒသတ င ်းနှင ွံ့န ိုင ငံတကာရစ ်းက က ယှဉ ဖပ င ထ ို်းရဖာက န ိုင မှုက ိုလည ်း ပ ိုမ ိုအာ်းရကာင ်းလာရစပါသည ။ အ မ နီ်းခ င ်းအာရှန ိုင ငံမ ာ်းအကကာ်းတ င ယင ်းသ ိုွံ့လိုပ ရဆာင မခင ်းက သန ်းရပါင ်းမ ာ်းစာရသာ ရက ်းလက ရနလူထိုက ို ငတ မ တ ရခါင ်းပါ်းမှုနှင ွံ့ ဆင ်းရဲန မ ်းပါ်းမှုမှ လ တ ရမမာက ရစခဲွံ့ပါသည ။ မမန မာန ိုင ငံသည လည ်း ၎င ်း၏အနာဂတ အတ က အဆ ိုပါအာမခံခ က က ိုဆိုပ က ိုင ရန အသင ွံ့အရနအထာ်း၌ ရှ ရနပါသည ။ မမန မာန ိုင ငံအရနမဖင ွံ့ ရတာင သူလယ သမာ်းမ ာ်း၏ထိုတ လိုပ န ိုင မှုအလာ်းအလာရကာင ်းမ ာ်းက ို အာ်းရပ်းမမ င ွံ့တင မခင ်း ထက ရနှာင ွံ့ရနှ်းရအာင လိုပ ရဆာင ရနသည ွံ့ မူဝါဒရဟာင ်းမ ာ်းက ို ခ ်းဖ က မပ မပင ရန လ ိုအပ ရနပါသည ။ ရရာင ်းလ ိုအာ်း ဦ်းရဆာင စ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ မှုစနစ မဖင ွံ့ အထ က နှုန ်းတ ို်းတက ရရ်းက ိုသာဦ်းစာ်းရပ်းဖပီ်း မပည တ င ်းစာ်းနပ ရ ကခာဖူလိုံမှုက ိုသာ အဓ ကထာ်းစ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ ရနသည ွံ့ သမာ်းရ ို်းက ထိုတ လိုပ စ ိုက ပ ်းမှုမှရိုန ်းထ က လ ိုသည ွံ့ စ တ ဓာတ မပ မပင ရမပာင ်းလဲမှုမ ာ်းလ ိုအပ လ က ရှ ရနပါသည ။ စ ိုက ပ ်းရရ်းမူဝါဒတ င လည ်း မပည တ င ်းစာ်းသိုံ်းသူနှင ွံ့ န ိုင ငံတကာရစ ်းက က ရကကာင ွံ့မဖစ ရပေါ်လာသည ွံ့ ဝယ လ ိုအာ်းဦ်းရဆာင စ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ မှုစနစ က ို ဦ်းတည ဗဟ ိုမပ ဖပီ်း စ ိုက ပ ်းထိုတ လိုပ မှုကဏ္ဍ တစ ခိုလိုံ်းအတ က ထိုတ လိုပ မှုစ မ ်းရည က ိုမမ င ွံ့တင သည ွံ့ ဆန ်းသစ မှန ်းရမာမှုဆီသ ိုွံ့ ဦ်းတည ရရ ွံ့လ ာ်းရန လ ိုအပ ရနပါသည ။ လက ရတ ွံ့လိုပ ရဆာင ရာတ င ထ ရရာက ရအာင မမင ဖပီ်းသဟဇာတရှ ရသာရကာင ်းမ န သည ွံ့ပူ်းရပါင ်းလိုပ ရဆာင မခင ်းအတ က vi အစ ို်းရ၊ ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍနှင ွံ့ အရပ အသာ်းအဖ ဲွံ့အစည ်းတ ိုွံ့အကကာ်းရှ ရနသည ွံ့ က ဉ ်းရမမာင ်းရသာအရတ ်းအရခေါ်၊ အမမင သရဘာထာ်းမ ာ်းနှင ွံ့ ဆက ဆံလိုပ ရဆာင မှုထိုံ်းတမ ်းစဉ လာမ ာ်းက ို ခ ်းဖ က ရန လ ိုအပ ပါသည ။ ဤအနာဂတ ရမာမှန ်းခ က သစ မှာ မမန မာန ိုင ငံအတ က “ဆန အ ို်းမှသည စာ်းဖ ယ စိုံမခင ်းရတာင ်းဆီသ ိုွံ့” ကနဦ်း ဦ်းတည ရရ ွံ့လ ာ်းမှု၊ ထ ိုမှတစ ဆင ွံ့အာရှန ိုင ငံအာ်းလိုံ်းနှင ွံ့ ကမ္ာတလ ာ်း အလာ်းတူရရ ွံ့လ ာ်းမှု မဖစ ရပေါ်ရစရန ရည ရ ယ တင မပထာ်း သည ွံ့ မူဝါဒစာတမ ်းမဖစ ပါသည ။ ရည ရ ယ ခ က မှာ ရက ်းလက ရနမပည သူလူထိုအတ က ဝင ရင နှင ွံ့အသက ရမ ်းဝမ ်းရက ာင ်း မ ာ်းက ို မမ င ွံ့တင ရပ်းဖပီ်း စာ်းသိုံ်းသူမ ာ်းအတ က ပိုံမှန ရရှ န ိုင သည ွံ့ အာဟာရကကယ ဝရသာ စာ်းရသာက ကိုန မ ်းစိုံ ပ ိုမ ိုတ ို်းမမ င ွံ့ ထိုတ လိုပ န ိုင ရရ်း အာ်းရပ်းလိုပ ရဆာင ရန မဖစ ပါသည ။ အငယ စာ်းရတာင သူလယ သမာ်းမ ာ်းက ို လ တ လပ စ ာလိုပ က ိုင ရဆာင ရ က ခ င ွံ့ရပ်းမခင ်း၊ အသ ပညာနှင ွံ့ နည ်းပညာမ ာ်းပံွံ့ပ ို်းရပ်းမခင ်းနှင ွံ့ ၎င ်းတ ိုွံ့အာ်းဖမ ွံ့မပနှင ွံ့ကမ္ာွံ့ရစ ်းက က မ ာ်းနှင ွံ့ ခ တ ဆက ရပ်းမခင ်းမဖင ွံ့သာ ဤရည ရ ယ ခ က က ို မပည ွံ့မီရအာင ရဖာ ရဆာင န ိုင မည မဖစ ပါသည ။ ဤမူဝါဒစာတမ ်းတ င န ိုင ငံရတာ အစ ို်းရကခ မှတ ရလွံ့ရှ သည ွံ့သီ်းနှံပန ်းတ ိုင မ ာ်းထက မမန မာန ိုင ငံ၏စ ိုက ပ ်းရရ်းနှင ွံ့ စာ်းနပ ရ ကခာကဏ္ဍရခတ မီတ ို်းတက ရရ်းအတ က ခ ိုင မာရသခ ာဖပီ်းစနစ က သည ွံ့နည ်းဗ ြူဟာက ို အဆ ိုမပ တင မပထာ်းပါ သည ။ ဤဗ ြူဟာ၌ ရစ ်းက က စနစ က ိုဦ်းတည ဖပီ်း ပိုဂဂလ ကကဏ္ဍဦ်းရဆာင မှုမပ သည ွံ့ရင ်းနှီ်းမမ ပ နှံမှု၊ ဆန ်းသစ မမ င ွံ့တင ရမပာင ်းလဲမှုနှင ွံ့ န ိုင ငံတဝှမ ်းလိုံ်းရှ အငယ စာ်းရတာင သူလယ သမာ်းမ ာ်းက ိုဦ်းစာ်းရပ်းသည ွံ့ အင တ ိုက အာ်းတ ိုက လိုပ ရဆာင မှုစနစ ပါဝင ပါသည ။ အဓ ကပါဝင လိုပ ရဆာင သူမ ာ်းအကကာ်း အလိုံ်းစိုံပ င ွံ့လင ်းမမင သာမှုနှင ွံ့ ယိုံကကည စ တ ခ န ိုင မှု သ င မပင လကခဏာရှ ဖပီ်း ပ ိုမ ိုရကာင ်းမ န ရသာဆက စပ လိုပ ရဆာင မှုမ ာ်းနှင ွံ့အတူ ရရရှည ရမာမှန ်းဖပီ်း ထ ရရာက မှန ကန မှုရှ သည ွံ့ အစ ို်းရမူဝါဒမ ာ်းနှင ွံ့ ဌာနဆ ိုင ရာပံွံ့ပ ို်းမှုမ ာ်း လ ိုအပ ရကကာင ်းက ိုရဖာ မပထာ်းပါသည ။
Title: From Rice Bowl to Food Basket: Three Pillars for Modernizing Myanmar’s Agricultural and Food Sector
Description/subject: Executive Summary: "Myanmar is ready for change. This is particularly true of Myanmar’s rural sector, where7out of every 10 people live and most people in poverty reside. Over half are employed directly in agriculture, producing food for themselves, their communities, and for sale. Many others in rural areas – often without their own land – work hard in rural non-farm enterprises transporting produce, processing foods, and providing needed services. Others may migrate in search of work in Myanmar’s cities or abroad. Yet despite its location at the crossroads of the most economically dynamic region in the world, Myanmar has among the highest rates of poverty and malnutrition in the region. Myanmar’s Asian neighbors have shown that, in response to consumer demand for increasingly diversified diets as incomes and urbanization rise, investing in rural infrastructure and establishing policies to encourage their farmers to produce products that meet market needs will unleashavirtuous circle of growth among farmers, food processers, and service providers who are linked to growing urban centers and export markets. Raising productivity and diversifying from low-value grains into high-value meats, oilseeds, pulses, horticulture, and aquaculture stabilizes food expenditures for increasingly urban consumers, raises incomes for rural areas, and strengthens competiveness in regional and global markets. Among Asian neighbors, it has helped raise millions of rural people out of hunger and poverty. Myanmar is ready to seize that promise for its own future. Myanmar needs to break away fromalegacy of policies that have held back, rather than stimulated, its farmers’ potential. A mind-set change is needed to step out of the business-as-usual approach that focused on supply-led, yield increases and domestic food self-sufficiency. Agriculture policy needs to shift to an innovative vision that centers onademand-led approach driven by domestic consumers and foreign markets with increased productivity throughout the sector. To succeed in practice, narrow silos of thinking and communication among the government, the private sector, and civil society should be broken down to encourage more harmonious and coordinated efforts. This new Vision is inherent in the title of this White Paper – moving from rice bowl toafood basket for Myanmar and increasingly to the rest of Asia (and the world). The aim is to improve the incomes and livelihoods of rural communities while increasing the availability of more stable, diversified, and nutritious diets to consumers. This objective can be achieved by empowering smallholder farmers, equipping them with knowledge and technical inputs, and connecting them to urban and global markets. vi In place ofagovernment-driven focus on crop production targets, the paper offersaconcrete and systematic strategy for how Myanmar can modernize its agricultural and food sector. The strategy embraces market-oriented, private sector-led investment, innovation, and dynamism that is centered on small farmers throughout the country. It requires forward-looking and efficient government policies and institutional support with greater interaction among key stakeholders characterized by full transparency and accountability..."
Description/subject: ABSTRACT: The paper proceeds from the widely held assessment that "Myanmar’s economy is handicapped by structural imbalance, instability, inefficient and imperfect markets, and distorted prices. The paper delineates how this general state of affairs is clearly evident in the agricultural sector. It then identifies the constraints retarding the development of agricultural growth. Among the factors blamed for blunting the sector’s competitiveness are policies on: land, production, procurement and price, foreign exchange, and subsidy. The excessive controls inherent in these policies, coupled with their erratic implementation, are seen to createageneral atmosphere of uncertainty and unpredictability in the economy and an erosion of the government’s credibility. Based on the negative impact of the existing policies and on the need to strengthen the competitiveness of the agricultural sector and thus help it contribute to the sustainable development of the country’s economy, the paper recommends alternative policy options. Foremost among these alternatives suggested are the contracting out of land use rights; the shift of focus towards maximizing farmers’ incomes and profits, rather than merely output; the liberalization of trade; unification of the exchange rates; reduction of subsidy to, or privatization of state-operated enterprises (SOEs), and allowing the entry of private enterprises to compete freely with SOEs."